Jesse Quist Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Jesse Quist
Jesse ndiye KeyholeKukura uye kushambadzira kunotungamira. Iye anovaka zita reKeyhole nekugadzira hukama hwakasimba nevamwe vatengesi venzanga uye anoda kutaura nezve kushambadzira.
Mashandisiro Ekushandisa Hashtags Kuwedzera Yako Campaign Kusvika
Chitatu, Nyamavhuvhu 31, 2016 Mugovera, January 14, 2017 Jesse Quist
39% emabhizinesi haateedzere kwavo mushandirapamwe uye zviri kutungamira kumikana yakarasika. Ini ndinokuratidza maitiro ekunyatso kuteedzera ma hashtag panguva yezviitiko, uye nzira dzaungashandisa kuvaka mushandirapamwe unosvika. Ini ndichatarisa pazvinhu zviviri: Iwo akakosha mameturu iwe aunofanirwa kuve wakagadzirira kuyera kana iwe uchimhanyisa hashtag mushandirapamwe Matanho aunogona kushandisa kuunza yakafara kusvika Kukosha Kwemagariro Yemushandirapamwe Metriki Mazhinji enhimbe dzemagariro akagadzirwa